ဆရာမြားနအေ့ထိမျးအမှတျအဖွဈနဲ့ ကိုရီးယားနိုငျငံ အငျခြှ နျးမွို့ မှာ သီခငျြးသီဆိုဖြျောဖွခေဲ့တဲ့ ကရငျမလေး မာသာထူးဝါးရဲ့ဗီဒီယို – Cele Lover
ဆရာမြားနအေ့ထိမျးအမှတျအဖွဈနဲ့ ကိုရီးယားနိုငျငံ အငျခြှ နျးမွို့ မှာ သီခငျြးသီဆိုဖြျောဖွခေဲ့တဲ့ ကရငျမလေး မာသာထူးဝါးရဲ့ဗီဒီယို
တေးရေးဦးထူးဝါးရဲ့မြိုးဆကျလေးဖွဈတဲ့ နျောမာသာထူးဝါးဟာ ဖခငျဖွဈသူရဲ့ဂီတအမှကေို ဆကျခံနိုငျတဲ့ သမီးလေးတဈယော ကျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ငယျစဉျကထိုငျးနိုငျငံမှာနခေဲ့ပွီး ဖခငျဖွဈသူဆုံးပါးပွီးနောကျပိုငျး ကနျြရဈတဲ့မိသားစုတှကေ ကိုရီးယားနိုငျငံကိုပွောငျးရှေ့ နထေိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဖိုးမူကွီးရဲ့ ရငျတှငျးခံစားခကျြ အစဈအမှနျတဈခုဖွဈတဲ့ ” အိမျလေးတဈလုံးလိုခငျြတယျ ” သီခငျြး ဟာ အောငျမွ ငျမှု ရရှိ ခဲ့ပွီး အားပေးတဲ့ပရိသတျတှလေညျး ရှိလာခဲ့ပါတယျ။ အသကျငယျငယျနဲ့ အောငျမွငျခဲ့တဲ့ ဖိုးမူကွီးဟာ သူမရဲ့ဂီတအရညျအသှေးကို ပိုပွီးမွှငျ့တငျနိုငျအောငျ ကွိုးစားနသေူလေးပါ။ ဒီနမှေ့ာလညျး ကိုရီးယားနိုငျငံ အငျခြှနျးမွို့မှာ ဆရာမြားနအေ့တှကျ သူမ ဖြျောဖွနေတေဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို လူမှုကှနျရကျမှာဝမြှေခဲ့ပါတယျ။
နှုတျခမျးဖြားကထှကျလာတဲ့ သံစဉျလေးဟာ ရငျထဲထိရောကျသှားအောငျ ဆှဲဆောငျနိုငျတဲ့ အသံပိုငျရှငျလေးပါပဲ။ အသငျ အပွကောငျးတဲ့ ဆရာမနဲ့ဆုံတှခေဲ့ရတာကွောငျ့ ရှကျပုံးသီးလေးကနေ ရတနာလေးဖွဈလာတော့မှာပါ။ သူမရဲ့ သီဆိုဖြျောဖွေ မှုကို မွ နျမာပွညျ မှာသာမက ကိုရီးယားလူမြိုးတှကေလညျး နှဈသကျအားပေးကွပါတယျ။ ဆယျကြျောသကျအရှယျကလေးလေး တဈယောကျဖွဈ ပမေယျ့ ခံယူခကျြနဲ့ ကွိုးစားမှုက လေးစားလော ကျပါတယျ။ မွနျမာ့နှဦေးတျောလှ နျရေးမှာ လညျး ဖိုးမူကွီးတို့တဈမိသားစုလုံးဟာ ပွညျသူတှနေဲ့ တဈသားတညျးရပျတညျခဲ့ပါတယျ။
အသငျအပွကောငျးတဲ့ဆရာမကွောငျ့အကောငျးဆုံးဖြျောဖွနေိုငျခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ” Blessed Teacher Day. 🇰🇷😇 သမီးကို အမွဲ လမျးပွပဲ့ပွငျပေးပွီး၊ သီခငျြးတှကေိုလညျးအကောငျးဆုံး သီဆိုနိုငျအောငျ လမျးပွပေးတဲ့ ဆရာမကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျပါတ ယျရှငျ။ ဆရာ မလို သီခငျြးကောငျးကောငျးဆိုတတျ အောငျ သမီးအမြားကွီး ကွိုးစားပါမယျ။ ကြေးဇူးအထူးတငျတယျ။ ခဈြတယျ။ 👩‍🦳🥰🙏🏻 ” ဆိုပွီး ဝမြှေခဲ့ပါတယျ။ ဖိုးမူကွီးနဲ့ ဆရာမတို့အတူတူ ဖြျောဖွခေဲ့တဲ့ သီခငျြးလေးဟာ စီးမြောလို့ကောငျးလှနျးတာမို့ ပရိသ တျကွီးအ တှကျ ပွနျ လညျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
ဆရာများနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်နဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံ အင်ချွ န်းမြို့ မှာ သီချင်းသီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ကရင်မလေး မာသာထူးဝါးရဲ့ဗီဒီယို
တေးရေးဦးထူးဝါးရဲ့မျိုးဆက်လေးဖြစ်တဲ့ နော်မာသာထူးဝါးဟာ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ဂီတအမွေကို ဆက်ခံနိုင်တဲ့ သမီးလေးတစ်ယော က်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာနေခဲ့ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူဆုံးပါးပြီးနောက်ပိုင်း ကျန်ရစ်တဲ့မိသားစုတွေက ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဖိုးမူကြီးရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက် အစစ်အမှန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ” အိမ်လေးတစ်လုံးလိုချင်တယ် ” သီချင်း ဟာ အောင်မြ င်မှု ရရှိ ခဲ့ပြီး အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေလည်း ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဖိုးမူကြီးဟာ သူမရဲ့ဂီတအရည်အသွေးကို ပိုပြီးမြှင့်တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေသူလေးပါ။ ဒီနေ့မှာလည်း ကိုရီးယားနိုင်ငံ အင်ချွန်းမြို့မှာ ဆရာများနေ့အတွက် သူမ ဖျော်ဖြေနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို လူမှုကွန်ရက်မှာဝေမျှခဲ့ပါတယ်။နှုတ်ခမ်းဖျားကထွက်လာတဲ့ သံစဉ်လေးဟာ ရင်ထဲထိရောက်သွားအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ အသံပိုင်ရှင်လေးပါပဲ။ အသင် အပြကောင်းတဲ့ ဆရာမနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့် ရွက်ပုံးသီးလေးကနေ ရတနာလေးဖြစ်လာတော့မှာပါ။
သူမရဲ့ သီဆိုဖျော်ဖြေ မှုကို မြ န်မာပြည် မှာသာမက ကိုရီးယားလူမျိုးတွေကလည်း နှစ်သက်အားပေးကြပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးလေး တစ်ယောက်ဖြစ် ပေမယ့် ခံယူချက်နဲ့ ကြိုးစားမှုက လေးစားလော က်ပါတယ်။ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှ န်ရေးမှာ လည်း ဖိုးမူကြီးတို့တစ်မိသားစုလုံးဟာ ပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။အသင်အပြကောင်းတဲ့ဆရာမကြောင့်အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ” Blessed Teacher Day. 🇰🇷😇 သမီးကို အမြဲ လမ်းပြပဲ့ပြင်ပေးပြီး၊ သီချင်းတွေကိုလည်းအကောင်းဆုံး သီဆိုနိုင်အောင် လမ်းပြပေးတဲ့ ဆရာမကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတ ယ်ရှင်။
ဆရာ မလို သီချင်းကောင်းကောင်းဆိုတတ် အောင် သမီးအများကြီး ကြိုးစားပါမယ်။ ကျေးဇူးအထူးတင်တယ်။ ချစ်တယ်။ 👩‍🦳🥰🙏🏻 ” ဆိုပြီး ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။ ဖိုးမူကြီးနဲ့ ဆရာမတို့အတူတူ ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးဟာ စီးမျောလို့ကောင်းလွန်းတာမို့ ပရိသ တ်ကြီးအ တွက် ပြန် လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Previous Article အနုပညာရှငျမြား အမှုပိတျပေးရနျ စဈကောငျစီက အောကျလမျးနညျးဖွငျ့ စညျးရုံးနပွေီး အမှုပိတျပေးခ သိနျးရာခြီ ဈေးတောငျး
Next Article SPEAK OUT လုပျခဲ့တာကွောငျ့ စဈကောငျစီရဲ့ ဖမျးမိနျ့ထုတျပွနျ ခွငျး ခံလိုကျရတဲ့ အလှမယျ သူဇာဝငျ့လှငျ